U-Edson Glauber -Izono zibangela ukuba ubulungisa bukaThixo bawe-ukubala ukuya eBukumkani
U-Edson Glauber -Izono zibangela ukuba ubulungisa bukaThixo buwe
Ukumkanikazi weRosary kunye noxolo ukuze Edson Glauber :
Ndabona iNkosazana enguKumkanikazi inesithsaba segolide entloko ibibengezela ngokuqaqambileyo. Ukusuka kuye Imisebe yentliziyo engafiyo yothando yayiphuma iye kwindalo iphela awayeyiphethe ngezandla:
Uxolo malube nawe!
NdiyiNkosikazi yeHlabathi. Ukusuka entliziyweni yam ndininika idangatye lam lothando, ukuba ndizonwabise iintliziyo zenu kwaye ndiniphilise kuzo zonke izifo zomzimba nezokomoya. Ngaphandle kwempindezelo akukho kuxolelwa Ngokucacileyo, ukurhoxa okufunyenwe kwiSakramente yokuvuma akuqhutywa njengento engenamsebenzi nokuba lowo uguqukayo ngokwakhe akazenzi ngokucacileyo izenzo zokuziphindezela (ngaphandle nje kokuba bonke abathembekileyo kufanele, ngenene, ubuyekeze izono zabo kunye nehlabathi liphela); Endaweni yoko, okoko nje kukho isikhubekiso-nokuba asifezekanga -isohlwayo sihlala sihleli ngokupheleleyo uxolelwe ngenxa yesivumo seSakramente esifanelekileyo. Kodwa ngokubanzi nangokubanzi, kungenxa yamandla okuphindaphinda uMnqweno kaKrestu ukuze izono zixolelwe, kungoko ke kungachanekanga ukuthi “ngaphandle koxolelo akukho kuxolelwa,”Kuba ingaphezulu kwayo yonke uYesu owenze intlawulelo yezono zethu., ngaphandle koxolelo akukho nceba. Yenza impindezelo ngezono zakho kwaye uyakufumana uxolelo lo Nyana wam oyiNgcwele; hlala uxolele kwaye ufumane inceba yakhe.
Ndiyanisikelela nonke: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen! - Julayi 26, 2020
Uxolo entliziyweni yakho!
Nyana wam, xelela umntu ukuba abuyele kuThixo. Izono zabantwana bam abaninzi zibangela ukuba ubulungisa baphezulu buhle ezulwini ukuze bohlwaye ngokuqatha, kuba akukho siko, akukhoguquko okanye ukuguquka ngokunyanisekileyo. Guqula iintliziyo zenu kwaye iNkosi iya kuba nemfesane kuye ngamnye kuni nakwiintsapho zenu. Sukuba lilizwi lam. Buyela eNkosini ngoku kwaye uthando lwaKhe luya kukujikeleza, ikunike uxolo kunye nokukhuselwa kubo bonke ububi kunye neengozi zala maxesha amnyama okuwexuka kunye nokuswela ukholo.
Ndiyakusikelela: egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen! -Julayi 25, 2020
Ngokucacileyo, ukurhoxa okufunyenwe kwiSakramente yokuvuma akuqhutywa njengento engenamsebenzi nokuba lowo uguqukayo ngokwakhe akazenzi ngokucacileyo izenzo zokuziphindezela (ngaphandle nje kokuba bonke abathembekileyo kufanele, ngenene, ubuyekeze izono zabo kunye nehlabathi liphela); Endaweni yoko, okoko nje kukho isikhubekiso-nokuba asifezekanga -isohlwayo sihlala sihleli ngokupheleleyo uxolelwe ngenxa yesivumo seSakramente esifanelekileyo. Kodwa ngokubanzi nangokubanzi, kungenxa yamandla okuphindaphinda uMnqweno kaKrestu ukuze izono zixolelwe, kungoko ke kungachanekanga ukuthi “ngaphandle koxolelo akukho kuxolelwa,”Kuba ingaphezulu kwayo yonke uYesu owenze intlawulelo yezono zethu.
← Pedro Regis - Inyaniso…
UGisella Cardia - Kungekudala wam… →